DentOS, network inoshanda sisitimu | Linux Vakapindwa muropa
DentOS, network inoshanda sisitimu
Iyo Linux Foundation yakavhurwa mazuva mashoma apfuura kuburitswa kwe yekutanga vhezheni yeDentOS inoshanda sisitimu iyo yakatarisana yekushandisa mune switch, ma routers, uye akasarudzika network network.
Iyi yekutanga vhezheni yeDentOS Iyo yakavakirwa paLinux Kernel 5.6 uye zvirikuitika zveprojekti zvakanyorwa muC uye zvinogoverwa pasi peirayisensi yemahara yeruzhinji yeEclipse uye zvinotaurwa kuti chinangwa chekutanga cheprojekiti yaive kugadzira chikuva chemidziyo yenetiweki pazvivakwa zveAmazon.
Iko kusimudzira kunoitwa nekutora chikamu kweAmazon, Delta Electronics, Marvell, NVIDIA, Edgecore Networks uye Wistron NeWeb (WNC).
Iyo Linux Foundation, iyo isiri-purofiti sangano iyo inoita kuti hukuru hukuru kuburikidza neakavhurika sosi, nhasi yazivisa Arthur, Dent yekutanga kodhi kuburitswa, chirongwa chinogonesa kugadzirwa kweneti inoshanda sisitimu (NOS) yemanetwork. Akaparadzaniswa.
Shanduro yaArthur, yakatumidzwa zita raArthur Dent, mutambi mukuru muHitchhiker's Guide kuGirazi, inoshandisa Linux kernel 5.6 ichangobva kuburitswa uye inoshandisa switchchDev kuita nyore kubatanidza, kubvisa zvirevo zvakaoma uye manejimendi shanduko yeS SDK, uye kutsigira zviripo zveLinux zvishandiso.
1 Nezve DentOS
1.1 Nezve yekutanga vhezheni yeDentOS
mazino inoshandisa iyo Linux switchchev kernel subsystem kugadzirisa packet switching, ichikubvumidza iwe kuti ugadzire zvinodzora zveEthernet switch dzinogona kuendesa kufambisa furemu uye network mapakeji ekugadzirisa mashandiro kune akakosha Hardware machipisi.
Iyo software yakavakirwa pane yakajairwa Linux networking stack, iyo NetLink subsystem nemidziyo yakadai seIPRoute2, tc (Traffic Control), brctl (Bridge Control) uye FRRouting, pamwe neVRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), LLDP (Link Layer Discovery Protocol) uye MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol).
Mamiriro ezvinhu yakavakirwa pane kugoverwa kweONL (Vhura Network Linux), iyo naizvozvowo inoshandisa hwaro hweDebian GNU / Linux package uye inopa inosimudza, kumisikidza uye madhiraivha ekumhanya pane switch.
ONL inogadzirwa neiyo Open Compute chirongwa uye ipuratifomu yekugadzira yakasarudzika netiweki michina iyo inogona kuiswa pane anopfuura zana akasiyana switch switch. Iyo seti inosanganisira vanodzora kuti vabatanidze nema gaji anoshandiswa mukushandura, sensors tembiricha, kutonhorera, mabhazi eI100C, GPIO, uye maSfcecevers eSFP.
Pamusoro pehunhu hwesisitimu, zvinotevera zvinotevera.
Inoshandisa Linux Kernel, switchchdev, uye mamwe maLinux-based mapurojekiti sehwaro hwemhinduro (hapana zvinodzora kana pamusoro)
Bata ASIC neSilicon yeNetworking / Datapath senge chero imwe Hardware
Inorerutsa mabvisiro, maAPIs, madhiraivha, uye yakadzika-nhanho kumusoro izvo zviripo mune izvi switch uye imwe yakavhurika software.
Inobatanidza nharaunda yevatengesi ODM, SI, OEM uye vashandisi vekupedzisira.
Inogadzirisa iyo network inoshanda sisitimu dambudziko reiyo Yakaparadzirwa Enterprise Edge kesi yekushandisa uye inoitambanudzira kune mamwe mashandisiro kesi, senge Enterprise Datacenter
Nezve yekutanga vhezheni yeDentOS
Iyo yekutanga vhezheni yeDentOS Yakave yakaburitswa ye8 Mellanox uye Marvell ASIC-yakavakirwa switch inosvika kune 48 10Gb chiteshi. Iyo inotsigira akasiyana maASIC uye eneti ekugadzirisa machipisi, anosanganisira Mellanox Spectrum, Marvell Aldrin 2, uye Marvell AC3X ASICs ine Hardware packet yekufambisa tafura.
Iyo yekutanga vhezheni inopa rutsigiro rwe802.1Q (VLAN), NAT, PoE, inesimba nzira yekushandisa OSPF uye ISIS protocols (yakavakirwa paFRRouting), kumisikidza traffic kugadzirisa mitemo, kuunganidza telemetry pane kushanda kwepuratifomu uye network basa.
Nezve manejimendi, unogona kushandisa IpRoute2 uye ifupdown2 maturusi, pamwe ne gNMI (gRPC network management interface). YANG dhata modhi (asi chimwe chizvarwa chitsva, RFC-6020) chinoshandiswa kutsanangura kumisikidzwa.
Mukota yekutanga ya2021, yechipiri vhezheni inotarisirwa, iyo inosanganisira rutsigiro rwe VxLAN, IPv6, NetConf / OpenConfig, PPPoE, EVPN Multihoming, Anycast uye 802.1x masuo (PNAC, Network Access Control).
Uye zvinotaurwa zvakare kuti yechitatu vhezheni yakarongerwa yechipiri hafu ya2021, iyo inosanganisira rutsigiro rweMCLag (chinongedzo kuunganidzwa), 802.1br.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » DentOS, network inoshanda sisitimu
Cosmopolitan, yakajairwa C raibhurari ine muchinjikwa-chikuva chinogoneka
VMware yakamhan'arira aimbove mukuru wayo nekutadza kuzadzisa zvisungo zvayo zvechibvumirano